काठमाडौँ उपत्यकामा ह्वात्तै बढ्याे चिसाे, कति छ न्यूनतम तापक्रम ? — Imandarmedia.com
काठमाडौँ उपत्यकामा ह्वात्तै बढ्याे चिसाे, कति छ न्यूनतम तापक्रम ?
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ‍। आज बिहान ९ बजे बस्ने भनिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र उपस्थित भएपछि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको एक नेताले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार परिषद्‍को बैठक बस्‍न ६ सदस्यमध्ये करिब ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले एक जना मात्रै उपस्थित नभए पनि बैठक स्थगित हुन्छ ।
यसअघिनै विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवा बैठकमा नआउने भनेर जानकारी गराइसकेका थिए। स्थायी कमिटीको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए।
भोलि सरकारविरूद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन राखिएकाले परिषद्को बैठकमा सभापति सहभागी भएर भागबन्डा गर्न नहुने र त्यसले गलत सन्देश जाने कांग्रेस नेताहरुको तर्क थियो। यसअघि पनि देउवा अनुपस्थित हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो।
१३ महिनादेखि परिषद्को बैठक नबस्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ४६ प्रमुख तथा सदस्यहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् । दलहरूबीच भागवण्डा नमिल्दा बैठक बस्‍न नसकेको हो । संवैधानिक अंगमा योग्य, क्षमताभन्दा पनि परिषद्का पदाधिकारीहरूको भागबन्डामा आधारित हुने गरेको छ ।